NGENA EBHOKISINI ELIBOMVU EGQUMENI • @ logboxredhill • INDLU EYAKHIWE NGAMAPULANGWE 1 - I-Airbnb
NGENA EBHOKISINI ELIBOMVU EGQUMENI • @ logboxredhill • INDLU EYAKHIWE NGAMAPULANGWE 1
Red Hill South, Victoria, i-Australia
Inqolobane ibungazwe ngu-Chloe
U-Chloe Ungumbungazi ovelele
vakashela i-logboxredhill .com .au ukuze uthole ugqozi...
Ungamangazwa yi-faceade yakhe yasemaphandleni. Uma ufaka Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe 1 ku-Log Box Red Hill uthunyelwa ngokushesha endaweni eyingqayizivele eyenzelwe ukukhuthaza. Indlu eyakhiwe ngamapulangwe inezimpawu ze-inthanethi eziluhlaza, izindawo zaphansi zekhonkolo ezikhathazekile, indawo yokuhlala ye-banquette, i-heater yokhuni, ubuciko obumangalisayo (obuthengiswayo), amasevisi e-lux kanye nompheme wangasese obheke indawo enhle kakhulu yezihlahla. Lungiselela ukuvuselelwa kabusha njengoba ubona ukushona kwelanga okumangazayo embhedeni wakho omkhulu ontofontofo.
Lapho nje ukuchitha isikhathi esingasetshenzisiwe, indlu eyakhiwe ngamapulangwe inikezwe injongo entsha. Ngokuyinhloko i-studio sohlelo oluvulekile, ilingana kahle nombhede omkhulu ontofontofo kanye nezihlalo ezincane ezizungeze i-heater yokhuni entofontofo. Ikhishi elincane liyisisekelo; i-hotplate, i-toaster, i-kettle nomshini wekhofi (ama-pod afakiwe) yenza umsebenzi. Kukhona i-Webber BBQ encane emphemeni ongayisebenzisa. Isiqandisini sebha sincane futhi singagcina iziphuzo zakho zipholile.
* * Sisanda kubambisana NEBHOKISI le-BRUTZY lokudla okumnandi okuthunyelwe ngqo endlini eyakhiwe ngamapulangwe. * *
4.97 · 158 okushiwo abanye
I-Red Hill ivumelaniswe namagquma aqhakazile, amadlelo aluhlaza kanye nokuphila kwasolwandle. Lesi sifunda siyikhaya lezitolo zewayini zezinga lomhlaba kanye nemisebenzi yangaphandle eyenza izivakashi zijabulele okokuzithokozisa unyaka wonke phakathi nokuhlala kwazo.
Abanikazi bahlala esayithini endlini ehlukile ecishe ibe ngu-30M ukusuka endlini eyakhiwe ngamapulangwe. Sicabangele ukuthi sibe ngabaphathi bakho bamahhotela asendaweni, abatholakalayo ukusiza uma kudingeka.
UChloe Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Red Hill South namaphethelo